Iingcebiso ezili-10 zoLwakhiwo lweMinecraft namaqhinga
NguJesse Hlala, UThomas Hlala, uJacob Cordeiro
1 13 Emva
Yenza i-starter yakho yasekhaya ibe nesitayile.
Ukwakha indlu yokuqala yesitayile eMinecraft yenza umdlalo ube mnandi kwaye ikuvumela ukuba ubonise abahlobo bakho.
Qala ngesikwere okanye uxande. Xa usakha uxande, yiya kwelinye lamacala amade endlu, kwaye embindini wodonga, nqonqa ibhloko enye yodonga ukuba kukho iibhloko ezingaqhelekanga kumqolo, okanye unkqonkqoze iibhloko ezi-2 ukuba zikhona linani leebhloko. Kwindlu yesikwere, khetha naliphi na icala kwaye wenze into efanayo.
proair hfa ikhuphoni lomenzi we-2019
Naphi na apho wenza umngxunya kulapho ucango luya kubekwa khona, ke beka umnyango (okanye umnyango kabini) kumngxunya osandula ukuwenza. Umnyango uneebhloko ezi-2 ubude. Kwibhloko e-1 ecaleni kwamacala omabini omnyango, yongeza iibhloko ezi-2 phezulu, ukwenza udonga lube bude bude bungaphezulu ngomnyango, kusenziwa iintsika. Dibanisa iintsika ezimbini ozenzileyo phezulu ngebhloko.
Yiya kwikona nganye yendlu, kwaye wakhe ngaphezulu iibhloko ezi-3. (Ibhloko yokugqibela oyibekayo ikumgangatho wophahla.) Emva koko yakha iibhloko ezimbini ukuya phezulu kwiibhloko ezikufutshane nekona nganye. Iibhloko aziphenduli kumxhuzulane, ngoko unokubeka ngokulula iibhloko ngeenxa zonke kubude besithathu. Indlu kufuneka ngoku ibe nenqanaba lesiseko kunye nenqanaba eliphezulu.
Ngoku kongeza uphahla olusicaba phezulu, gcwalisa imingxunya eludongeni ngalunye ngeenqwelomoya zeglasi, kwaye, ekugqibeleni, buyisela umgangatho ngayo nayiphi na into oyifunayo (enjengomthi okanye ikhaphethi). Beka izifuba zakho, ibhedi, iitafile zokwenza izinto, iishelufa zeencwadi, kunye nezinye izinto endlwini yakho entsha, enesitayile.
Mbini 13 Emva
Ukuphucula uyilo lwangaphandle ngeendlela ezintathu ezinesitayile.
Emva kokuba ikhaya lakho lokuqala lisetelwe, lixesha lokuhombisa!
Imilo: Emva kokwakha isikwere esilula okanye uxande, yenza amaphiko eskwere ongezelelweyo avela kwisakhiwo esikhulu, enze izindlu ezimilise u-U, izindlu ezimilise u-L, amabali wesibini atshintshiweyo kwiibhloko ezimbalwa eziko.
Ubunzulu: Yenza udonga apho iibhloko zingena nzulu, njengesikwere esimnyama kwimiqolo emibini yokuqala yebhodi yokujonga (phantse njenge-zig-zag).
Iinkcukacha: Yongeza iinkcukacha ezincinci, ezifana netshimini, ifestile yeglasi enamabala, okanye izinyuko! Yenza isakhiwo sikhangeleke ngathi kudala sikhona, sisebenzisa ilitye moss okanye ukutyala ingca ende.
3 13 Emva
Abadlali abaninzi bayathanda ukufihla ukukhanya abakusebenzisayo kulwakhiwo abalwakhayo. Kwangoko kumdlalo, xa unezinto ezimbalwa onokuzifumana, zama izibane zeembiza, ezibuyisela iitotshi zesilingi kunye neglasi phantsi kwazo. Kodwa ayisiyiyo kuphela inketho.
Ikhaphethi ngokukodwa sisisombululo esilula nesinomtsalane. Umkhenkce namanzi kukwizibhloko ezivumela ukukhanya kuphume, kodwa zithatha ezimbini kumgangatho wokukhanya, zibonelela ngendawo ekhanyayo.
5 13 Emva
Dibanisa iibhloko ngeendlela ezahlukeneyo.
Ngamanye amaxesha, ukufumana iibhloko ezifanelekileyo ezibonakala zilungile kunye kunzima kwaye kuyabhidisa, kodwa indibaniselwano yebhloko encinci inokulingana phantse nayiphi na imeko:
Umthi we-oki, iiplanga zom-oki kunye nezitena zamatye
I-Birch ngamaplanga, i-sandstone, kunye ne-oki yeplanga
Iiplanga zeplanga ezenziwe ngomthi, udongwe olubomvu, kunye ne-hay bale
Izitena zamatye, i-cobblestone, kunye nezitena ezingaphantsi
Udongwe olu-cyan, uboya be-cyan, kunye ne-quartz
Izitena zamatye, i-cobblestone, kunye nezitena
Ngesihlahla se-spruce, ngamaplanga e-spruce, kunye ne-slab yamatye aphindwe kabini
Ibhloko le-quartz, umkhenkce kunye nodongwe olubomvu
Glowsto ne, ilitye lentlabathi, kunye nezitena zangaphantsi
ndingathatha i-benadryl ephelelwe lixesha
6 13 Emva
Qonda izangqa, amabala, kunye nekhaya.
Ukwenza nayiphi na into erhangqiweyo eMinecraft kunzima kakhulu. Ngokobuchwephesha, iMinecraft ayinazangqa, kodwa unokulinganisa ukubonakala kwesangqa. Landela la manyathelo ukwakha izangqa ezilula:
Qala ngomqolo wesiseko ubuncinci ubuncinci iibhloko ezi-2 (zikwabizwa ngokuba sisiqendu sokuqala phezulu kwesangqa). Emva koko thabatha u-1 kwinani leebhloko onazo kumqolo wesiseko kwaye ubeke elo nani leebhloko kumqolo ongezantsi kwecandelo lokuqala, ukwenza inyathelo lesiteji.
Eli licandelo lesibini. Phinda eli nyathelo de ube uneebhloko ezi-2 kuphela kwicandelo.
Xa uneebhloko ezi-2 kuphela kwicandelo, jonga indlela ekufuneka uyenze ngayo isangqa sakho, emva koko ubeke ibhloko enye ngokwe-diagonally ude ufike kumda wendawo okuyo.
Buyisela umva into oyenzileyo ngaphambili ukuze wongeze ibhloko enye endaweni yokuthabatha 1, ukudala amanyathelo ezinyuko ezisecaleni.
Eli nyathelo lenza amacala eesangqa. Phinda eli nyathelo de ufike kwinani lokuqala leebhloko zesiseko sakho.
Phinda le nkqubo ukwenza ezantsi kwesangqa.
7 13 Emva
Lithini igumbi lokuhlala ngaphandle kwesofa? Unokwenza ifenitshala ngokwezifiso ngeendlela ezahlukeneyo, ke kuya kufuneka uzame ukubona ukuba yintoni esebenzayo. Iiwebhusayithi ezininzi kunye nemijelo ye-YouTube ikwanikezela ngezifundo. Funda indlela yokwakha ifanitshala Isixeko .
9 13 Emva
Dlala ngesanti kunye negrabile.
Ngaba ukhe ufune ukwakha inkunkuma (ehlala ibizwa ngokuba yi- ukunyuka, KwiMinecraft)? Akukho ngxaki: Sebenzisa isanti okanye igrabile! Umgangatho okhethekileyo wezi bhloko zimbini zezinye zeebhloko ezimbalwa ezichaphazeleka ngumxhuzulane. Xa isanti okanye igrabile iwela kwiibhloko ezingagcwalisanga ngokupheleleyo (njengeetotshi), isanti kunye negrabile ziwela nje ngaphandle kokuchaphazela ibhloko ezibethileyo.
10 13 Emva
Uphahla luyakukhusela kwizinto zamanzi nekhephu, nakwizigcawu eziyingozi, ezinokunyuka iindonga.
Izinyuko zihlala zisetyenziswa njengophahla. Wakhe wajonga kwindlu yelali? Inezinyuko zophahla. Vele ujikeleze umphezulu wesakhiwo ubeke izinyuko. Xa ugqibile umaleko wokuqala, yiya kwibhloko enye ungene ngaphakathi, kwaye ujikeleze kwizangqa kwakhona. Uluhlu ngalunye lwezinyuko.
Emva kokuba wenze uphahla olulula, unokuhlala uyeka emva kwezitepsi ezimbalwa kwaye ubeke uphahla olusicaba njengoluhlu lokugqibela.
Shumi elinanye 13 Emva
Ukulungiswa komhlaba kubomi bokwenyani kubandakanya ukubumba umhlaba. Xa ufaka itreyini kwiMinecraft, wenza into ibonakale ngathi ibisekhona kwihlabathi elenziwa ngokwendalo. Ukucwangciswa komhlaba kusetyenziselwa ukufihla iziseko, imigibe, okanye izifundo ezithintelayo (zihlala zibizwa njalo izifundo zokupaka ).
13 13 Emva
Sebenzisa iipleyiti zoxinzelelo.
Ipleyiti yoxinzelelo yindlela yokuhamba. I-Minecraft ngoku ineentlobo ezine ezahlukeneyo zamacwecwe oxinzelelo: ilitye, ukhuni, isinyithi kunye negolide. Amacwecwe oxinzelelo asebenza kakuhle ukukunceda uvule kwaye uvale umnyango ukuze ungachithi ixesha ucofa ekunene.
ungayiphelisa njani into yokugxeka
isoda yokubhaka i-jock itch
I-labetalol hydrochloride 100 mg
Ngaba ibuprofen 800mg iya kukuphakamisa
Ixabiso le-b12 injections
mirtazapine 7.5 mg iipilisi